I-AFP ehamba phambili enezimbobo ezifakiwe Umkhiqizi neFektri | Beihai
Iphaneli ye-Aluminium foam enezimbobo ezifakiwe, okungangeni umlilo, i-ultralight, ukufudumeza okushisayo, i-anti-corrive, i-electromagnetic wave waveing, i-100% eco-friendly & evuselelekayo, ukumunca umsindo, njll.
Ukuze sifinyelele umphumela omuhle wokumunca umsindo ngaphandle, umgwaqo omkhulu, ujantshi, njll., Sithuthukise i-AFP ekhethekile esetshenzisiwe. Bhoboza izimbobo njalo ku-AFP njengengxenye engu-1% -3%, ngokusebenza kahle kokumunca umsindo nezinga eliphezulu lokumunca umsindo. Ibhodi lokuvikela umsindo elenziwe ngebhodi le-foam sandwich sandwich, u-20mm ubukhulu, ukwahlukanisa umsindo 20 ~ 40dB. Izinga lokumunca umsindo elilinganiswa ngendlela yamagagasi amile lingu-40% ~ 80% ebangeni lika-1000Hz kuya ku-2000Hz. Iphaneli ye-Aluminium foam enezimbobo ezifakiwe, okungangeni umlilo, i-ultralight, ukufudumeza okushisayo, i-anti-corrive, i-electromagnetic wave waveing, i-100% eco-friendly & evuselelekayo, njll.
Kuvaliwe-Cell Aluminium Foam enezimbobo ezihlanganisiwe
Ubuningi: 0.25g / cm³ ~ 0.75g / cm³
Ukuthethelela: 75% ~ 90%
Imbobo: ukusatshalaliswa okufanayo kwe-1-10mm, imbobo enkulu engu-4-8mm
Amandla acindezelayo: 3Mpa ~ 17Mpa
Amandla okugoba: 3Mpa ~ 15Mpa
Amandla athile: ukumelana nesisindo kungafinyelela ngaphezu kwezikhathi ezingama-60 zesisindo; Ukusebenza okuphikisayo akushisi, akuvezi igesi enobuthi; Corrosion ukumelana, ukuphila isikhathi eside.
Imininingwane yomkhiqizo: I-2400mm * 800mm * H noma ukukhiqizwa okwenziwe ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende
Langaphambilini Iphaneli Elivaliwe Leseli le-Aluminium Elivaliwe
Olandelayo: Iphaneli elihlanganisiwe